IWolder yazisa i-WIAM # 65 Lite kunye nezixhobo ezithathu eziPhakathi kububanzi | Iindaba zeGajethi
Siseseziqwengana zokubonisa kukaWolder ngale ntsasa, kwaye ifemu yaseSpain ayifuni ukushiya yonke into kwinyani ebonakalayo kunye neepilisi, iya isomelela ngokwentengiso yeefowuni ezikumgangatho ophakathi, nantsi indlela isandla kunye neYoigo kunye neJazztel ibonelela ngeetheminali zayo kubathengi beefowuni. Nangona kunjalo, iWolder inayo eyona asethi yayo iphambili kubathengisi, kwaye kukuba ikhathalogu yezixhobo ezinamaxabiso afikelelekayo, kunzima ukuxhathisa isilingo. Namhlanje bandise usapho lwezixhobo eziphakathi kwinqanaba nge-WIAM # 34, # 27 kunye # 33, beshiya eyona yokugqibela, i-WIAM # 65 ngexabiso kunye neempawu zentliziyo yokuhlaselwa.
Siza kunika uphononongo oluncinci lwento entsha ethiwe Wolder namhlanje eMadrid, izixhobo ezine ezine-Android 6.0 ngenjongo yohlaziyo lwexesha elizayo kwaye ezingakushiyi ungakhathali.
1 I-WIAM # 65 Lite-Umphathi omkhulu wosapho olutsha lweWolder
2 I-WIAM # 34 -Inzwa yeminwe kunye ne-NFC kuwo wonke umntu
3 I-WIAM # 27 kunye # 33 -Izixhobo zokufaka zeWolder
4 Konke nge-Android 6.0 kunye ne-Power Button app
I-WIAM # 65 Lite-Umphathi omkhulu wosapho olutsha lweWolder
Isixhobo esitsha seWolder asitshintshi nto kwaye sitshintsha phantse yonke into. Sithetha ngale nto ukuba yindlalifa ethe ngqo kwi-WIAM yesiqhelo # 65, isixhobo apho iWolder ingene ngokupheleleyo kwimarike ye-phablet, enoyilo olumangalisayo, olukhatshwa zizinto ezilungileyo. Ukwamkelwa kakuhle koluntu kulushukumisile uphawu ukuba luthathe inyathelo elibonakalayo, libonisa I-WIAM # 65 Lite, uguqulelo olunokunyamezeleka ngakumbi kwisixhobo esinye esitsalile ukujonga okuninzi. Ngale ndlela, siza kufumana ulwakhiwo lwe-aluminium, kunye ne-chibisi ye-unibody, ke ngekhe sibe nethuba lokususa ibhetri, kodwa siya kuzinza.
Esi sixhobo siza kuba neprosesa Imithombo yeendaba iMediaTek 6735P kunye nokusetyenziswa kwebhetri ephantsi, isicwangciso esisebenza kakuhle kwi-brand yaseSpain kwimakethi yethebhulethi. Ukuhambisa eyakho Iscreen se-intshi eyi-5 ngesisombululo HD, iimpawu 2GB ye-RAM, yanele ukumelana nezicelo zangoku.
Ngokubhekisele kwimemori yangaphakathi, siya kuba nayo 16GB yokugcina, Iyandiswa ngekhadi le-MicroSD. Kwelinye icala, siya kuba nefayile ye- Ikhamera yangemva kwe-13 MP kunye nekhamera yangaphambili ye-8MP ukuthatha iiselfie ezigqibeleleyo, ngaphezulu kokwaneleyo usuku nosuku, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba kubiza malini yi- € 159 kuphela. Kwelinye icala, ixabiso ayisiyiyo into emiselweyo xa isiza kukwazi ukonwabela iitekhnoloji ezinje umfundi weminwe evula isixhobo sakho kwimizuzwana eyi-0,3, ilungelo iWolder elifuna ukwenza ukuba lifumaneke kuwo wonke umntu.
Sibonile i-Wolder entsha ye-mid-range kwaye inyani kukuba ihambile kakuhle, kuyilo oluqhubekayo, kodwa oko akushiyi mntu ungakhathali, kuba ifana nezixhobo ezinkulu ezinjenge-HTC One.
I-WIAM # 34 -Inzwa yeminwe kunye ne-NFC kuwo wonke umntu
Ngubani owathi iteknoloji yokufunda iminwe kwaye i-NFC ibiza? Ungaze uphinde, iWolder ifuna ukwenza ezi zinto ziphambili zifumaneke kubo bonke abasebenzisi kwisixhobo esine-intshi ezintlanu ngesisombululo se-HD esixabisa kakhulu yi- € 149,90 kuphela (iyathengiswa ukusukela namhlanje).
Kwakhona ngokugqitywa komgangatho ophezulu, i-WIAM # 34 ine-aluminium ngasemva kunye nemibala emibini ebonakalayo, njengoko sibonile kwiifoto. Nangona kunjalo, into ebalulekileyo kukusebenza, kuba uya kusebenzisa iprosesa I-Mediatek 6737 yephakathi kunye ne-2GB ye-RAM, ihamba ne-16GB yokugcina ugcino. Ukudityaniswa kwayo kwepolycarbonate kunye nealuminium kufezekisile ubunzima be-142 yeegram ezenza ukuba inyamezeleke ngaphandle kweesentimitha ezintlanu. Kwicandelo lokufota, iya kuba nekhamera esemva ye-13MP kunye nekhamera yangaphambili ye-8MP.
I-WIAM # 27 kunye # 33 -Izixhobo zokufaka zeWolder
Inkampani yaseSpain ikwafuna ukukhuphisana kwizixhobo zokufaka, olu hlobo lwemveliso ngexabiso eliphantsi ngokwenene elihlangabezana neemfuno zobuncinane. Ngenxa yoku bazisa ezi modeli zimbini ngobukhulu obahlukeneyo.
IWIAM # 27
Ii-intshi ezingama-5 kwisisombululo se-HD
Iphakathi kweprosesa yeMediaTek processor
Ikhamera yangasemva eyi-13 MP
Ixabiso: € 99,90
IWIAM # 33
5,5 intshi HD isisombululo
Uluhlu lwemibala yeLaser Pink Pink kunye nePro Grey
Imemori yangaphakathi: 16GB
Ixabiso: € 129,90
Konke nge-Android 6.0 kunye ne-Power Button app
Akululanga ukufumana izixhobo ezikumgangatho ophakathi nge-Android 6.0, nangona kunjalo, sikwazile ukuvavanya izixhobo ezitsha ezine ezivela kwiWolder kwigumbi lokubonisa, ngolungelelwaniso olukhanyayo oluhle olusebenzisekayo olulungileyo ukusebenzisa. Kwelinye icala, bajolise ukuhlaziywa kweQhosha laMandla, isicelo esitsha somxholo wePremiyamu onokuyisebenzisa simahla ngokuba ngumthengi weWolder, apho siya kufumana ukubhaliswa simahla kwiPanda Mobile Security okanye iVideona (iingcali kwitekhnoloji yeVR) phakathi kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imiboniso » IWolder yandisa uluhlu lweWIAM ngeemodeli ezine, apho iWIAM # 65 Lite ime ngaphandle
Ayilulo olu olunye uphawu lwezincamathelisi akunjalo? Ukuchitha loo mali kwimveliso engaziyo ukuba yenziwe nyani eSpain, sele ndiyithengile eTshayina ngexabiso eliphantsi, iBlackview R6 ibhetele kakhulu kunaleyo kwaye inexabiso eliphantsi
Ewe abenzi eSpain. Akukho phawu lweefowuni eziphathwayo ezenziwe eSpain.